पोर्न साइटमा रोनाल्डो र बेकह्याम - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ कार्तिक २०७२, शनिबार ०३:३९ |
एजेन्सी । विश्वका स्टार फुटबलरहरु पोर्न साइटमा ! यो सुन्दा सुरुमा सबैलाई अचम्म लाग्छ । तर विश्वका नम्बर एक फुटबलरहरु विभिन्न पोर्न साइटका पनि सेलिब्रेटी बनिरहेका छन् ।
हालै एउटा अध्ययनले पोर्न साइटहरुमा सर्च हुने फुटबल खेलाडीहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययनपछि निकालिएको रिपोर्टअनुसार रियल म्याड्रिडबाट खेल्ने पर्चुगली फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबैभन्दा बढी पोर्नहबमा सर्च हुने खेलाडी हुन् ।
पोर्न साइटहरुले आफ्नो साइटमा आएर भिजिटरले सबैभन्दा ज्यादा टाइप गर्ने फुटबल खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरे । पोर्न साइटहरुले सार्वजनिक गरेको १५ फुटबल खेलाडीको नाममध्ये १ नम्बरमा फुटबल स्टार रोनाल्डोको नाम छ ।
इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान तथा विश्व फुटबलका सुपरस्टार डेभिड बेकह्याम यो सूचिमा दोस्रो स्थानमा छन्। बार्सिलोनाका लागि खेल्ने अर्जे्न्टिनी फुटबल स्टार मेसी तेस्रो स्थानमा छन् भने ब्राजिली फुटबल स्टार नेइमार चौथो स्थानमा छन्। म्यानचेस्टर युनाइटेडका तथा इङ्ल्यान्डका कप्तान वायने रुनी पोर्न हबमा खोजिने खेलाडीको सूचिमा सातौं स्थानमा छन्।
पोर्न साइट हेर्नेहरुले विश्व चर्चित खेलाडीहरुलाई साइटमा खोज्ने गरेको यो अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
Previousशनिवारका लागि अष्ट्रेलियन डलरको दर भाउ
Nextविदेशमा रहने सबै नेपाली नेपालको सद्भावना दूत !
नाङ्गो ग्राहकहरुका लागि नाङ्गो रेष्टुराँ खुल्दै
११ असार २०७३, शनिबार १४:३७
नेपाली इन्जिनियरले बनाए व्याडमिन्टन खेल्ने रोबोट
७ श्रावण २०७२, बिहीबार १६:०२